၂။ တစ်ဦးတည်း လိုက်မလား၊ အဖွဲ့လိုက် လုပ်မလား - Investigative Journalism Manual | Investigative Journalism Manual
> Chapters > အခန် > ၂။ တစ်ဦးတည်း လိုက်မလား၊ အဖွဲ့လိုက် လုပ်မလား
စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုသတင်းတစ်ပုဒ်ကို တစ်ဦးတည်းသတင်းလိုက်ရန် လက်ခံလောက်သည့် အကြောင်းရင်းများကတော့
> ခြေနိုင်လက်နိုင် ရှိခြင်း
> အရင်းအနှီးနှင့် အဆက်အသွယ်များ အားလုံးမဟုတ်လျှင်ပင် အများစု သင့်တွင် ရှိနေခြင်း/li>
> လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို စိတ်ချရနိုင်သည်ဟု သင့်ဘက်မှ မသေချာခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် စုံစမ်းဖော်ထုတ်သတင်းထောက်လှမ်းမှုတစ်ခုသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်သည့် ပမာဏထက် လွန်စွာကြီးမားသည့်အခြေအနေသို့ မကြာခဏ ကူးပြောင်းသွားလေ့ရှိသည်။ လူစုံလေ ပို၍စီမံခန့်ခွဲနိုင်လေ ဖြစ်ကာ သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ ချဉ်းကပ်နိုင်သောကြောင့် လမ်းချော်သွားနိုင်ရန် မလွယ်တော့ချေ။
သတင်းတစ်ပုဒ်ကို အဖွဲ့လိုက် စုံစမ်းဖော်ထုတ်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်တချို့ရှိသည်။ ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်ရမည်မှာ ပရောဂျက်မန်နေဂျာ သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် အဖွဲ့သားအားလုံးထံမှ လုံလောက်ဆီလျော်သော အချက်အလက်များကို ရယူပြီး အတူတကွ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ပေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် အလွန်အရေးပါသည်။ နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မှာ အဖွဲ့သားအားလုံးက သတင်းအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဝိုင်းဝန်းတွေးတော၍ ပြတ်သားရှင်းလင်းသည့် လုပ်ဆောင်ရန်စာရင်း ပေါ်ထွက်လာစေမည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု စတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်အတွက် အောက်ပါကိစ္စရပ်များကို စဉ်းစားဖို့လိုသည်။
? အဖွဲ့သားများသည် မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သို့ ဆက်သွယ်ကြပါမည်နည်း
? တည်းဖြတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်သို့ သတ်မှတ်ထားပါမည်နည်း
? စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေစဉ်အတွင်း ရှေ့ခရီးမဆက်နိုင်သည့်အခြေအနေများကို အဖွဲ့က မည်သို့ ကိုင်တွယ်ပါမည်နည်း
? နောက်ဆုံးသတင်းမူအပေါ် သဘောတူမှုရရှိရေး အားလုံးပါဝင်နိုင်ရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ပါမည်နည်း
? မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံရန် သဘောတူပါသနည်း
? အကယ်၍လိုအပ်ပါက ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် စုံစမ်းခြင်း၊ အသွင်ယူခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ ရရှိအောင် ငွေပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်မည်လား
အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်လည်း တာဝန်ယူမှုအခန်းကဏ္ဍများကို ပြတ်သားစွာ သတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ အကယ်၍ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် တစ်ချိန်တည်း၌ သတင်းတိုက်၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန် ယူထားရပါက အဖွဲ့၏ စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုကိုဟန့်တားမည့် ဘုတ်အဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ပါဝင်ခြင်းမပြုရန် သေချာစေရမည်။ ထို့ပြင် ပရောဂျက်မန်နေဂျာနှင့် သတင်းတိုက်ခေါင်းဆောင်မှုတို့ကြား ဆက်ဆံရေးသည်လည်း ကွဲပြားရှင်းလင်းစွာ (လိုအပ်လျှင် စာချုပ်စာတမ်းနှင့်တကွ) သတ်မှတ်ထားရမည်။
စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု၏ အတွင်းကိစ္စ၊ အပြင်ကိစ္စများအားလုံးကို အဖွဲ့သားများက နားလည်ကြသလား၊ သူလိုကိုယ်လို ပြည်သူများအနေဖြင့် အဖွဲ့၏အကျိုးစီးပွား မည်သို့ ရှိသနည်း ဟူသည့် ကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်လည်း အဖွဲ့သားများကိုယ်တိုင်က အကျွမ်းတဝင် ရှိရပေမည်။ ဆွေးနွေးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အကောင်းဆုံးသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စောင့်စည်းရမည့်ကျင့်ဝတ်များလည်း ပါဝင်ရမည်။
ပရောဂျက်မန်နေဂျာသည် စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု ထိရောက်စေရန် ခေါင်းဆောင်မှုပေးသူတစ်ဦးအနေဖြင့် အဖွဲ့၏ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များကို ကြီးကြပ်ကာ အဖွဲ့သားများအားလုံးထံသို့ လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များကို ပြောဆိုရမည်။ ပရောဂျက်မန်နေဂျာသည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဒေသန္တရကိစ္စများအပေါ် အများပြည်သူ၏သိနားလည်မှု ကျယ်ပြန့်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ ဆန်းစစ်ရမည်။ ပရောဂျက်မန်နေဂျာသည်ပင် အဖွဲ့သားများနှင့် သတင်းတိုက်ခ ဦးဆောင်သူတို့အကြား ဆက်သွယ်ပေးရမည့် ပေါင်းကူးတံတားဖြစ်သည်။
Spotlight အဖွဲ့၏တွေ့ရှိချက်များသည် ဒေသအခြေစိုက် သတင်းခန်းအဖွဲ့သားများ အားလုံးပါဝင်သည့် ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု နမူနာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ကလေးငယ်များအပေါ် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများ လိင်အမြတ်ထုတ်နေမှုအား ဘော်စတွန်ကတ်သိုလစ် ဂိုဏ်းချုပ်စီရင်နယ်များထဲမှ ရဟန်းအမတ်များ၊ ဘုန်းတော်ကြီးများက စနစ်တကျ ဖုံးဖိထားခဲ့ကြောင်းကို Boston Globe သတင်းထောက် အဖွဲ့လေးတစ်ခုက ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သူတို့သတင်းကို ထုတ်ဝေပြီးသည့်နောက်မှသာ အခြား သတင်းတိုက်တစ်ခုကလည်း သူတို့ဒေသရှိ အလားတူ အမှုအခင်းများကို မြေလှန်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ထို စုံစမ်းဖော်ထုတ်သတင်းလိုက်မှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည်ရိုက်ကူးခံခဲ့ရသည်။ ပနားမားစာတမ်းများသည် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု နမူနာကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၇၀ ကျော်မှ သတင်းထောက် ၄၀၀ ကျော်တို့ သည် ပနားမားဥပဒေလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ အချက်အလက် ပေါက်ကြားမှုများကို တစ်နှစ်အတွင်း စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ ကြသည်။ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ အားကစားသမားများ၊ ရာဇဝတ်ကောင်များနှင့် အခြားသူများစွာတို့သည် ဥပဒေနှင့်မညီသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပနားမားတွင် နိုင်ငံခြားဘဏ်စာရင်းများဖွင့်ထားကြောင်း ထိုသတင်း ထောက်များက တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
သတင်းထောက်တစ်ဦးတည်းချင်းဖြင့် မည်သို့မျှ ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် အကြောင်းမရှိသည့် စာရွက်စာတမ်းပေါင်း ၁၁ သန်းကျော်ကို ဖော်ထုတ် စိစစ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြီးမားဆုံး ဘဏ္ဍာငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံ ကြီးတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်သည့် တွေ့ရှိချက်များအားလုံးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် သတင်းဌာနရာနှင့်ချီ၍ ဘာသာစကား မျိုးစုံဖြင့် ပုံနှိပ်ဖော်ပြနိုင်ခဲ့ကြသည်။